IMicrosoft ingazenzela iwashi layo elihlakaniphile | Kusuka kuLinux
Kubukeka sengathi amawashi ahlakaniphile azoba yi-craze elandelayo kumadivayisi eselula. Ngemuva kwalokho Apple y Samsung qinisekisa ukuthi basebenzela ukudala okwabo amawashi ahlakaniphile, amahemuhemu aqinisekisa Microsoft uzojoyina lo mkhuba omusha wezobuchwepheshe.
Ngokusho The Wall Street JournalIMicrosoft isivele icele abahlinzeki e-Asia ngezinto ezahlukahlukene ukwenza lolu hlobo lwewashi. Futhi ngokusho kwalo mthombo, iMicrosoft ithumele izikrini ezingama-1.5-intshi ukuze kuthuthukiswe uhlobo oluthile. Kodwa-ke, akukakaziwa ukuthi inkampani izimisele ngempela ukuletha lo mkhiqizo emakethe.
Ukuthuthukiswa kwe- ubuchwepheshe beselula iguquke kakhulu eminyakeni yamuva. Amadivayisi wamanje avumela ukukalwa kokushisa komzimba kwabantu, ukukhomba indawo okuyo abasebenzisi noma ukuthola imiyalo yezwi. Isibonelo, uNike wethule iFuelBand, okuyisongo elihlinzeka ngezinkomba zomzimba lapho kuqeqeshwa.
Ngokusho kwesibikezelo somxhumanisi uGartner, kulinganiselwa ukuthi imakethe yamadivayisi angasetshenziswa emzimbeni ingabiza cishe ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi ngo-10.
Okwamanje izici lawa mawashi azoba nazo azaziwa ngokugcwele, kodwa njengoba kulindelwe, kuzodingeka zinikeze okuthile okuwusizo okungacatshangwa ku smartphoneLokhu kucacile uma ufuna ukudala imakethe ezungeze lawa madivayisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » IMicrosoft ingazakhela i-smartwatch sayo
UCarlos Alfonso kusho
Kungaba yimikhiqizo emihle ngokwengeziwe emkhakheni, amanani nezici ziyathuthuka, kanti iMicrosoft kubuchwepheshe ihlale ikhonjiswa ukuthi ikuyo.
Ngikumema ukuba ufunde kabanzi https://relojinteligente.shop/
Phendula u-carlos alfonso
Ukudalwa nokuqoshwa kwe-isos kusuka ku-terminal e-Archlinux